0	April 16, 2018 12:08 PM
Source: Constantino Chiwenga: Vote for Emmerson Mnangagwa If You Want to Live in Garden of Eden – VOA
General Constantino Chiwenga and other Zanu PF officials in Mashonaland West province on Sunday.
Retired General Constantino Chiwenga has urged Zimbabweans to vote for President Emmerson Mnangagwa and the ruling Zanu PF party in the forthcoming general elections.
Speaking at an election campaign rally in Mashonaland West on Sunday, vice president Chiwenga said, “If you want to live in the (Biblical) Garden of Eden, vote for Mnangagwa and Zanu PF.”
Chiwenga said Mnangagwa has been “running around looking for lines of credit to revive Zimbabwe’s economy and as such it shows that he has people at heart.”
Mugabe has accused Mnangagwa, Chiwenga and several Zimbabwe Defence Forces generals of staging a coup which led to his removal from office.
The army generals and Mnangagwa claim that Mugabe resigned after he was rejected by Zimbabweans who staged a protest demanding that he should step down.
Mnangagwa is expected to lock horns with MDC Alliance presidential candidate Nelson Chamisa, former vice president Joice Mujuru and several others in the general elections to be held sometime this year.
In a related election campaign event, thousands of people attended an MDC Alliance rally in Hillbrow, South Africa, on Sunday, which was addressed by MDC Alliance principals Professor Welshman Ncube, Tendai Biti, Agrippa Mutambara and several others.
Chamisa was represented by MDC-T acting chairperson Morgan Komichi.
‘Crying’ doctor suspended’
the latest articles 43284 Constantino Chiwenga 250 Emmerson Mnangagwa 2108 MDC Alliance 601